Ọrịa Coronavirus 2019 (Covid-19) bụ nje virus ọhụụ achọpụtara na ọ bụ ihe kpatara nnukwu ọrịa na-agbasa ngwa ngwa, gụnyere ọrịa oyi baa na-egbu egbu. Ọrịa a bidoro na Wuhan, China na Jenụwarị 2020, ma toro na ọrịa na-efe efe na nsogbu ụwa niile. Na v ...
2020 Global Top 10: aintlọ ọrụ kacha agba na mkpuchi
Nchịkọta Kwa Afọ nke Top Paint na Coatings Companies The Global Top 10 Nke na-esonụ bụ ogo nke ndị na-emepụta mkpuchi mkpuchi 10 zuru ụwa ọnụ na 2019. ingsnye ọkwa dabere na ahịa ahịa 2019. A naghị etinye ahịa nke ngwaahịa ndị ọzọ, na-abụghị mkpuchi. 1. PPG Coatings Sales (Net): $ 15.1 ijeri 2. The Sher ...
NOELSON Ngwaahịa ndị ejiri mee ihe maka mgbochi-corrosion.
Kedu ihe bụ Anti-corrosive Pigments? Corrosion na ígwè bụ nnọọ nkịtị na doro anya. Kwa afọ, nnọchi nchara n ’ụwa nile na-efu ihe karịrị ijeri $ 100. Ihe pigmenti nke na-ebelata mmebi ahụ mmebi bụ ihe mmebi mmebi. NOELSON Ngwaahịa ndị ejiri mee ihe maka mgbochi-corrosion. Kemgbe 1996, NOELSON ...